Meander: ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အမျိုးအစားများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 05/11/2021 16:00 | ဘူမိဗေဒ
မြစ်များသည် ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က ဝုတ်. ၎င်းသည် မြစ်လက်တက်များ စီးဆင်းနေသော ရေစီးကြောင်း၏ ကံကြမ္မာကြောင့် မြစ်၏ ကွေ့ကောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြစ်များ၏ မတ်စောက်ဆုံး ကွေ့ကောက်ခြင်းကို ကွေ့ကောက်ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဝုတ်ခြင်း၊ ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်း သင်သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
2 ဝုတ်ကို ဘယ်လိုဖွဲ့တာလဲ။
3.4 တောင်တက်မြောက်ပြေး ဝုတ်
Meanders များကို ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြား မြစ်အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ကျစ်ထားသော၊ တည့်တည့်နှင့် ကွေးသော သို့မဟုတ် မြွေမြွေထိုး လက်တက်သုံးမျိုးရှိသည်။ ရေလွှမ်းလွင်ပြင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော မြစ်များ၊ လျှောစောက်သေးငယ်သောအခါ မျဉ်းကြောင်းများသည် အများအားဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အနည်များသည် အများအားဖြင့် အဖုအကျိတ်ပုံစံဖြင့် အနည်ကျပြီး ထိုနေရာမှ ကမ်းစပ်သို့ ရွေ့လျားကြသည်။ လျှောစီးမှုများတွင် တိုက်စားမှု လွှမ်းမိုးနေပြီး တာတမံသည် အာရုံစူးစိုက်မှု တွန်းအားကြောင့် မည်ကဲ့သို့ ဆုတ်ယုတ်သွားသည်ကို ထင်ရှားသည်။ ခုံးဇုံရှိ တာတမံ၏ ရှေ့ကို ခုံးခုံးဇုန်၏ ဆုတ်ခွာမှုနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၊ မြစ်လမ်းကြောင်းသည် စတင်ရွေ့လျားလာပြီး ကွေ့ကောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာမှာ အခြားမြစ်အမျိုးအစားများနှင့် ခွဲခြားရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် အလွန်ထင်ရှားသော အကွေ့အကောက်မျဉ်း. တခါတရံတွင် ၎င်းတို့၏ မူလဒေသကို အမည်ပေးကြသည်။ ၎င်းတို့ကို Aragon ၏ Ebro မြစ်ရှိ galachos ဟုခေါ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မစ္စစ္စပီမြစ်တစ်လျှောက်ရှိ စိမ့်ဟု ခေါ်သည်။
ကွေ့ကောက်သော စီးဆင်းမှုသည် အလွန်ကြီးမားသော အကွေ့အကောက်တစ်ခု ဖြစ်လာသောအခါ မြစ်၏လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် လွင်ပြင်ကဲ့သို့သော အချို့နေရာများတွင် အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေသဖြင့် အချို့နေရာများတွင် ရစ်ခွေသဏ္ဌာန်ရှိသော ရေကန်ဟု ခေါ်တွင်နိုင်သည်။ မြစ်တစ်ခုစီ၏ အကွေ့အကောက် ဖြစ်စဉ်သည် ၎င်း၏ စီးဆင်းမှု၊ ရေ၏ အမြန်နှုန်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပစ္စည်းများပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် ကွဲပြားသည်။
တခါတရံ မျက်နှာပြင် ညီညာနေသော်လည်း ရွေ့လျားနေသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏ ကုန်းစောင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည့် မြစ်တစ်စင်းရှိ ရေသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ အမြဲစီးဆင်းသည်။
၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်၊ သင်သည် ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပိုက်ထဲသို့ရေထည့်ပါ၊ ရေပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုအရှိန်တိုးလာသည် သို့မဟုတ် လျော့သွားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အမြန်နှုန်းသည် ပိုက်၏ ယိုင်လဲမှုအပေါ် မူတည်သည်။
မြစ်ကြမ်းပြင်မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ တူးမြောင်းအတွင်းရေစီးဆင်း; မြေမျက်နှာသွင်ပြင်က မတ်စောက်လေလေ၊ ရေစီးနှုန်းက ပိုများလေလေ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းအပေါ်တွင် အင်အားပိုကြီးလေဖြစ်သည်။ ဤအင်အားသည် ကုန်းမြေကို တိုက်စားစေပြီး မြစ်ရေလမ်းကြောင်းကို ကွေးညွှတ်သွားစေသည်။
မြစ်သည် စိမ့်ဝင်၍ စိမ့်ဝင်နိုင်သော မျက်နှာပြင်ကို ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ မြစ်သည် ဆက်လက်စီးဆင်းသွားသော သဘာဝလမ်းကြောင်း၏ အနားစွန်းများဖြစ်သည်။ နွမ်းသွားသလိုပဲ။ မျဉ်းကွေးကို ဖန်တီးပေးသော ဝိသေသ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ရရှိသည်။
ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ၊ ကွေ့ကောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ချေးစားခြင်း၊ တိုက်စားခြင်းနှင့် ဝတ်ဆင်ခြင်း အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။. ပထမ၊ ရေ၏လျင်မြန်သောစွမ်းအား သို့မဟုတ် ရေ၏ဖိအားသည် မြစ်ကမ်းပါးကို တိုက်စားစေပြီး မြေ၊ ကျောက်တုံးများနှင့် ကျောက်တုံးများကို သယ်ဆောင်သွားစေသည်။
ထို့ကြောင့် ဤအရာသည် ရေ၏တွန်းအားဖြင့် ရွေ့လျားနေသော မြစ်ကြမ်းပြင်ကို တိုက်စားစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကွဲကွာနေသော ဒြပ်စင်များ၏ အမှုန်အမွှားများသည် ဆောင့်တိုက်မိသည်၊ ယင်းကြောင့် မြစ်ကြမ်းပြင်၏ အုတ်မြစ်များကို ဖျက်ဆီးသည့် စွမ်းအားကို တိုးမြင့်လာစေပါသည်။
အပြင်ဘက်တိုက်စားမှုကြောင့် မျဉ်းကွေးပုံစံဖြစ်သကဲ့သို့ အနည်အနှစ်များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ကမ်းတွင် စုပုံကာ မျဉ်းကွေး၏ခုံး သို့မဟုတ် အတွင်းဘက်ခြမ်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Fluvial channels များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မြစ်များ၏ အလယ်နှင့် အောက်ပိုင်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ အရင်းအမြစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲပါတယ်။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မြစ်၏အောက်ပိုင်း သို့မဟုတ် အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး အကြီးမားဆုံးသော ဖိအားနှင့် အင်အားကို ယူဆောင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကွေ့ကောက်သူများသည် ရှုခင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မြစ်လမ်းကြောင်းကိုပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အလွန်သိသာထင်ရှားသော လှည့်ကွက်များနှင့် အခြားသော လှည့်ကွက်များ ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် မျဉ်းကွေးကိုဖြတ်သန်းစဉ် ရေ၏ centrifugal force ကြောင့်ဖြစ်သည်။. မြစ်၏အရွယ်အစားသည်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်- မြစ်လမ်းကြောင်း ကြီးလေလေ၊ တွန့်လိမ်သွားလေလေ ပိုသိသာလေဖြစ်သည်။
ရေ၏စွမ်းအားကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ မျဉ်းကွေးသည် ကဏ္ဍမှတဆင့် လက်ရှိစီးဆင်းနေသော ရပ်သွားကာ zigzag ပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိ အသိုက်များနှင့် ပြည့်နေပါသည်။ ဤမွမ်းမံထားသော ဘုံအမည်ကို "ဝုတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရေကန်" ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ကွေ့ကောက်ခြင်း အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။
မြစ်ကြမ်းပြင်၏ နက်နဲသော ပျက်စီးမှု တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ tectonic ရွေ့လျားမှုကြောင့် သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်း သက်သာရာရမှု တိုးလာသောအခါ၊ ကွေ့ကောက်နေသော ရေလမ်းကြောင်းသည် ၎င်း၏ အောက်ပိုင်းတိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်စတင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်နုပျိုခြင်းဟုခေါ်သည်။
အကွေ့အကောက်များသော ချိုင့်များသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ Grand Canyon ရှိ ကော်လိုရာဒိုမြစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ချိုင့်များကဲ့သို့ပင်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ကျဆင်းသွားသောအခါတွင် ရေစက်များသည် မြှပ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ Embedded Memory အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
၎င်းသည် နှစ်ဘက်ရွေ့လျားမှုဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြေခံမျဥ်းအဆင့် ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရေစီးနှုန်း ကျဆင်းခြင်း၏ အကျိုးဆက်။ ၎င်းတွင် အနည်ကျသော ကုန်းစောင်းတစ်ခုရှိပြီး ကမ်းစပ်မှ ပေါက်ထွက်သည့် အပိုင်းနှင့် ၎င်းအငေါ်ထွက်သည့် အခြားရေတိုက်စားမှုတို့ ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော ဘေးတိုက်ရွေ့လျားမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားသော ဝုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အနည်းငယ်ရှိသော ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင် မျောပါနေသော ရေစီးဆင်းမှုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဆင်းသည်နှင့်အမျှ မြစ်ရေ၏ အခြေခံအဆင့်၊ လှိုင်းလေထန်သော ရေစီးကြောင်းများသည် မြေပြင်၌ နက်နဲသော ဖြတ်တောက်မှုများကို ဖန်တီးသည်။
၎င်းသည် တောင်စောင်းအနည်းငယ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိသော အနည်အနှစ်များရှိသော နုန်းတင်လွင်ပြင်များတွင် အလွန်အသုံးများသော လွတ်လမ်းကွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျဉ်းကွေးအား အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ၎င်းကို အခြား zigzag အမျိုးအစားဟု ယူဆပါသည်။
မြင်းခွာပုံသဏ္ဍာန်ရေကန်အဖြစ် မြှပ်ထားသော ဝုတ်ကို ဖြတ်လိုက်သောအခါ ၎င်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ကျန်မြေများကို ဤအမည်ဖြင့် သိကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုသည် "El Rincón" ဟုလည်းလူသိများသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်တောင်ပိုင်းရှိ Lake Powell ဖြစ်သည်။ ကွေ့ကောက်မှုများ ပိုကြီးလာပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်ကူးလာသောအခါတွင် ဤမြင်းခွာပုံသဏ္ဍာန်ရေကန်များ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် တက်ကြွသောရေစီးဆင်းမှု မရှိပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤစွန့်ပစ်ထားသော မြစ်လက်တက်များသည် ခန်းခြောက်လာပြီး အနည်အနှစ်များဖြင့် ပြည့်လာသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ကွေ့ကောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်အရာနှင့် ၎င်း၏လက္ခဏာရပ်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » ဝုတ်